के भन्छन्, नेपाली काग्रेसका गल्कोट ३ वडाध्यक्षका उमेदवार वीरजङ भण्डारी ? – ebaglung.com
के भन्छन्, नेपाली काग्रेसका गल्कोट ३ वडाध्यक्षका उमेदवार वीरजङ भण्डारी ?
२०७४ बैशाख १८, सोमबार १५:४४	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गुमानसिंह भण्डारी, गल्कोट २०७४ बैशाख १८ । आसन्न स्थानीय तहको चुनावसँगै गलकोट नगरपालिका भित्रका ११ वडामा धेरै अध्यक्षका आकांक्षी देखिएका छन् । गलकोट नगरपालिका मध्येको वडा नम्बर ३ मा नेपाली काग्रेसबाट अध्यक्षको लागी एक नेतृत्व अनेक उम्मेदवार भए पनि अन्तत: वीरजङ भण्डारी सर्वसमत उमेदवार भएका छन ।
नेतृत्व हाँक्ने तयारीमा रहेका बलिया दाबेदार वीरजङ भण्डारी कांग्रेसको गढ मानिने गलकोट नगपालिका वडा नम्बर ३ मा नेपाली काग्रेसबाट वडा अध्यक्षको दाबेदार बनेका भण्डारी पर्यटन र भौतिक विकाससँगै समृद्ध गलकोटको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्दै छन् । उनमा हटियाका युवा, महिला, बृद्धबृद्धा सबैले सहयोग गर्ने विश्वास छ ।
पछिल्लो समय गलकोटका निकै चर्चित युवा तथा नेपाली काग्रेस गलकोट नगरपालिकाका उपसंयोजक समेत रहेका भण्डारीलाई सामाजिक छविले पनि सहयोग गरेको छ । एक सफल युवा व्यवसायी भण्डारी सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेका छन् । भण्डारी साबिक हटिया गाबिसको नेपाली काग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति पनि हुन । उसो त गलकोटमा रहेका कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताले पनि उनलाई खुलेरै समर्थन गरेका छन् । सामाजिक राजनैतिक क्षेत्रमा मात्रै होईन भण्डारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्र देखि तल्लो निकायसम्म राम्रो सम्बन्ध बनाएका युवा नेता हुन् ।
२०५४ सालबाट काग्रेस भन्ने शब्द राम्रोसँग बुभ्नुभएका भण्डारी सानै उमेरदेखि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गनुभएको हो । पछिल्लो समय क्रियाशिल युवा नेता सँगै पेशाले थ्री ब्रदर्श कन्ट्रक्सनका निर्माण ब्यवसायीको रुपमा चिनिनुभएका भण्डारी कक्षा ३ देखि कक्षाको बिद्यार्थी क्याप्टेन, कक्षा ९ देखि १२ सम्म सह क्याप्टेन, स्नाकोत्ततर तहमा बिद्यार्थी संमन्वय समितिका अध्यक्ष, २०६५ देखि २०६७ सालमा समाज कल्याण युवा समाज साबिक हटिया गाबिस वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष, साबिक हटिया गाबिसको गाबिस स्तरिय युवा तथा खेलकुद समन्वय समितिका अध्यक्ष, २०७१ सालमा नेपाल बिद्यार्थी संद्यको जिल्ला सदस्य, २०७० सालदेखि २०७३ सालसम्म नेपाल बिद्यार्थी संद्य गलकोट बहुमुखि क्यापसका ईकाइ सभापतिमा रहेर काम गरेका भण्डारी नेपाली काग्रेसबाट गत बर्ष गाउ पार्टी सभापतिमा सबैभन्दा कान्छो उमेरमा निर्वाचित भएका हुन् ।
हटियामा निर्वाचन जित्ने आफुँ नै सबैभन्दा बलियो उमेदवार भएको बताउँदै भण्डारीले अन्य वडामा पनि पार्टीले जित्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचनको मैदानमा पठाउनुपर्ने बताउछन् । पार्टीको मूल्यांकन जनताको चाहना, युवाको नेतृत्व हुनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता अनुरुप जनताले आफुलाई ढुक्कका साथ मतदान गर्ने उनको विश्वास छ ।
भण्डारीले आफु गलकोटमा भएका पर्यटकीय सम्पदा, खानेपानी, जटिबुटी, खोलानाला, पहाड, हावापानी लगायतसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको हुदाँ यी सबै बिषयलाई लिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ । यस बाहेक आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै परिर्वतन गर्ने उहाँको भनाई छ ।
आफनो राजनैतिक यात्रामा आफना हजुरबाबा तिल बहादुर भण्डारीले बिशेष मार्गनिर्देशन दिएको उनले बताए ।
गलकोट क्षेत्रबाट दैनिक युवाहरु बिदेशिएको अवस्थामा आफुलाई पनि कहिल्यै बिदेशी मोहले नछोएको बताउने भण्डारीले अन्य युवाहरुलाई पनि बिदेश नगई आफनै गाउठाउमा केहि गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन्छन् ।
गरे आफनै देशमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदेश्य बोकेर भण्डारीले थ्री ब्रदर्श कन्ट्रक्सन प्रालि ब्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ।
आफनो ब्यवसाय नभएपछि राजनिति गर्नेहरुले पैसाका लागी राजनिति गर्ने र समाजको बिकासमा भन्दा ब्यक्तिगत लाभका लागी काम गर्नतर्फ ध्यान दिने गरेको भन्दै त्यसबाट टाढा रहनका लागी राजनितिकर्मी कुनै न कुनै ब्यवसायमा संलनता हुनुपर्ने उनको मान्यता छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेसलाई जिताउन शिक्षक संघका अध्यक्ष शर्माको आग्रह !